Askar ku geeriyootay qarax miino oo ka dhacay duleedka Boosaaso – STAR FM SOMALIA
Askar ku geeriyootay qarax miino oo ka dhacay duleedka Boosaaso
Ugu yaraan labo askari ayaa ku geeriyootay, shan kalena waa ay ku dhaawacmeen, markii qarax miino lala eegtay gaari dagaal ay la socdeen Ciidamada Puntland oo marayay duleedka Boosaaso.
Wararka ayaa sheegaya in gaariga dagaal ay la socdeen Ciidamada Puntland uu ku sii jeeday buuraha Galgala, halkaasoo ay fariisin ku leeyihiin Ciidamada daraawiishta Puntland.
Askarta ku dhaawacantay qaraxa miino ayaa la geeyay Isbitaal ku yaalla magaalada Boosaaso, iyadoo qaar ka mid ah dhaawacyada askarta uu yahay mid culus.
War qoraal ah oo Al-Shabaab soo dhigeen baraha Internet-ka ee taageera ayaa lagu sheegay in qarax miino ay ku bur buriyeen gaadiid dagaal ay la socdeen ciidanka Puntland, ayna ku dileen shan askari.
Buuraha Galgala ayaa waxaa sanadihii u dambeeyay dagaalo ku dhex marayay Ciidamada Puntland iyo kuwa Al-Shabaab, inkastoo ciidamada Puntland la wareegeen fariisimo dhowr ah oo Al-Shabaab ku lahaayeen buuraha Galgala.
Dagaal markale ka dhacay Degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo
doon la dagaysa tahriibayaal badda Mediterraneanka (Daawo Sawirada)